FBSအဖွဲ့သည် ၇သန်းပြည့် ထရိတ်ဒါအား အလွန်ကြိုဆိုနေချင်ပါသည်
ကံထူးရှင် ၇သန်းပြည့်ထရိတ်ဒါအား FBSအဖွဲ့မှ ကြိုဆိုနေပါသည်. ကျွန်ုပ်တို့ဝက်ဆိုဒ်ရှိ လက်ရှိထရိတ်ဒါအရေအတွက်မှာ ၇သန်းပြည့်ဖို့နီးကပ်လာနေပါပြီ. ကံထူးရှင်အား တွေ့ဆုံရန် အလွန်ပဲ စိတ်လှုပ်ရှားနေမိပါသည်.
၂၀၁၇ ဒီဇင်ဘာတွင် ကုမ္ပဏီ၏ မှတ်တိုင်တစ်ခုဖြစ်သည့် ဖောက်သည် ၆သန်းပြည့်မြောက်ခဲ့ပါသည်. ယခုဆိုလျှင် ၂လကြာပြီဖြစ်ပြီး ဖောက်သည်အနေနှင့်ဆိုလျှင်လည်း အံ့အားသင့်ဖွယ် ၇သန်းပြည့်မြောက်ရန် အလွန်နီးကပ်လာပြီ ဖြစ်ပါသည်!
ကံထူးမည့် ထရိတ်ဒါအား FBSမှ ပုံမှန်အစဉ်အလာတိုင်းပင် လက်ဆောင်များကို ပေးအပ်ချီးမြှင့်ပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်. ယခုကဲ့သို့သော ထူးခြားသည့် အခွင့်အရေးအကြောင်းအား မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများထံ သတင်းစကားပြောကြားပေးကာ - ၇သန်းပြည့် ထရိတ်ဒါအား စောင့်ကြိုနေလိုက်ပါ!